အစိုးရကို ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ပြည်သူ- လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် - BBC News မြန်မာ
အစိုးရကို ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ပြည်သူ- လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ်
အစိုးရ မမှန်တာကိုလုပ်ရင် ပြည်သူတွေက ထောက်ပြရမယ် ဆိုပြီး ပခုက္ကူ ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်း ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရကို ထိန်းကျောင်းတဲ့အခါ ပြည်သူတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုက အရေးကြီးကြောင်း ပြောရင်းမှာပဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အပြစ်ရှာတဲ့ ဝေဖန်ပုံမျိုးတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ …. ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် ဝေဖန်ထောက်ပြ နိုင်တဲ့ အားကောင်းတဲ့ စနစ်မျိုး၊ အခြေအနေမျိုးတွေ ရှိနေပြီလား ။ ဝေဖန်မှုတွေ အပေါ်မှာရော အစိုးရက အလေးထားတာ တွေ့ရလား …. စတာတွေကို ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက် စနေည လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် အစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
Image caption အစိုးရ မမှန်တာကိုလုပ်ရင် ပြည်သူတွေက ထောက်ပြရမယ်
ပင်တိုင်ဆွေးနွေးသူအနေနဲ့ ဒဂုန်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သက်သက်ခိုင် ရှိနေခဲ့ပြီး၊ တခါ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ဒေသန္တရ အစိုးရ အဖွဲ့တွေမှာ ပြည်သူ့ အသံကို နားထောင်ဖို့ ဘာတွေ ပံ့ပိုးပေးထားသလဲ ဆိုတာကိုလည်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မိုးညို ဖြေဆို ခဲ့ပါတယ်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးထဲက ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လိုလားချက်၊ မကျေနပ်ချက်တွေ ရှိနေရင် မကွေးအစိုးရရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာမှာ ပြည်သူ့အသံ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍအောက် လာရောက် ရေးသားနိုင်တယ်၊ နောက်ဆက်တွဲ စုံစမ်းမှုတွေ ဖြေရှင်းမှုတွေ လုပ်ပေးမယ်လို့ ဒေါက်တာ အောင်မိုးညိုက ဆိုပါတယ်။
Image caption ပြည်သူ့အသံ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍအောက် လာရောက် ရေးသားနိုင်
Image caption ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံ
ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကတော့ ပြည်သူ့အသံတွေကို ထင်ဟပ်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ အစိုးရကို မေးခွန်းထုတ်တယ်၊ အစိုးရ ကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ အရာတွေကို တကယ်တမ်း အကောင်အထည်ဖော်မဖော်လည်း နောက်ဆက်တွဲ စောင့်ကြည့် နိုင်တယ် ဆိုပြီး လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရကြား ထိန်းညှိပေးနိုင်မှု အပေါ် ပြောဆို သွားပါတယ်။
ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသူတွေကတော့ တကယ်တမ်း လမ်းပေါ် ထွက် ဆန္ဒပြတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဖြစ်စေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေပေါ် ဝေဖန်တာတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဖြစ်စေ အရေးယူနိုင်တဲ့ ပုဒ်မတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သလို၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ပိုအားကောင်းဖို့ လိုနေတယ်လို့လည်း အသီးသီး ထောက်ပြ ဆွေးနွေး သွားကြပါတယ်။
အသံ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ အမေ့ခံ ပုံရိပ်
ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ အမေ့ခံ ပုံရိပ်
အသံ နှစ် ၃၀ ပြည့်လာပြီဖြစ်တဲ့ ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်သင့်ပြီလား
နှစ် ၃၀ ပြည့်လာပြီဖြစ်တဲ့ ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်သင့်ပြီလား
အသံ နှစ် ၃၀ အကြာ ရှစ်လေးလုံး ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်သင့်ပြီလား
နှစ် ၃၀ အကြာ ရှစ်လေးလုံး ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်သင့်ပြီလား